မိုက်ခရိုမွေး / ဝင်ရိုးစွန်းမွေးထည်အသိပညာ
ဘတ်စကက်ဘော wear အဘို့အထည်
ဒီဂျစ်တယ်ပုံနှိပ် polyester အသေးစားမွေး
ပတ်ချာလည် polyester တစ်ခုတည်းဂျာစီထည်
ပတ်ချာလည် Poly ထည်
polyester ထည်နှင့် polyester အဓိကထည်
polyester အထည်အလိပ် နှင့် polyester အဓိကထည်, သူတို့ရဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုဘာတွေလုပ်နေလဲ? အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖတ်သငျသညျအဖြေကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ polyester ထည် ဒါကြောင့်နေ့စဉ်ဘဝများတွင်အသုံးပြုသည့်ဒြပ်ထည်တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖြစ်ပါတယ်။ (1) အကြီးမားဆုံးအားသာချက်ကတော့ရှုံ့ခုခံနှင့်ကိုက်ညီထို့ကြောင့်အဝတ်အစားစေရန်သင့်လျော်သောအလွန်ကောင်းသောဖြစ်ပါတယ်။ (2) polyester ပိတ်ထည်မြင့်မားသောအစှမျးသတ်တိနှငျ့ elastic ခံ...
အဝတ်အစားထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးမက်ဆေ့ခ်ျကို - သည်ဆောင်းကာလလာမယ့်သည်သင်ပိုမိုဝင်ရိုးစွန်းမွေးထည်လိုအပ်နိုင်ပါသည်
ဝင်ရိုးစွန်းမွေးထည်ကဘာလဲ? ဝင်ရိုးစွန်းမွေးထည် ကြီးစွာသောစက်ဝိုင်းများကပထမဦးဆုံးအယက်ခဲ့သည့်ထည်တဦးမျိုး ကိုခေါ်စက်, ယက်ထုတ်လုပ်မှု ရှုပ်ထွေးသောဖြစ်စဉ်များတစ်စီးရီးပြီးနောက်မီးခိုးရောင်ထည်: ဆေးဆိုး, combing, မှေးကို anti-pill ။ နောက်ဆုံးတော့မီးခိုးရောင်ထည်ဖြစ်လာခဲ့သည် ဖွဲ့စည်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်ဝင်ရိုးစွန်းမွေး fabric.its ယေဘုယျအားဖြင့်အပြည့်အဝ polyester ။ သင်မည်သို့ရုပ်ပုံအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောစစျဆေးနိ...
သငျသညျအစဉျအမွဲတွေ့မြင်သို့မဟုတ် hoody ဝတ်ဆင်ကြပြီလော သငျသညျ hoody ဖြစ်စေခြင်းငှါပုံမှန်ထည်ကိုသိသလော ဒီနေရာမှာကိုယ်သင်ပိုမိုအသိပညာဝေမျှပါလိမ့်မယ် သိုးမွေးထည်တွေအကြောင်း။ ဘယ်လိုထိုးသိုးမွေးထည်ထုတ်လုပ်ခဲ့ ? သိုးမွေးထည်ပထမဦးဆုံးအယက်ခဲ့သည့်ထည်ဖြစ်ပါသည်, အပြောင်းအလဲနဲ့ sueding, ဆံပင်ဖမ်းပြီးနောက်ချောထည်ကိုထုတ်လာ သိုးမွှေးမျက်နှာပြင်နှင့်အတူ။ ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ခုတည်းခြမ်းမွေးသို့မဟုတ်နှစ်ခုခြမ်းမွေး။ သိ...
ပတ်ချာလည် Poly မွေးထည်
ဖှဲ့ polyester မွေးထည်
ဇစ် hoodie များအတွက်ပြင်သစ် Terry ထည်
သငျသညျဇစ် hoodie ကြိုက်လား? ငါ့အဘို့, အဖြေဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဇစ် hoodie ရုပ်ပုံလွှာကိုအောက်တွင်ပြသတူသောအရာဖွစျသညျ။ သငျသညျဇစ် hoodie ထားနိုင်သည့်ထည်သိရသလဲ ထို့အပြင် Terry ထည်သို့မဟုတ် hoodie ထည်အဖြစ်လူသိများပြင်သစ် Terry, တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ထိုးပြီး fabric.french Terry အထည်အချို့အညီထည်ထဲက်ရောက်သည်ကြိုးဆွဲကြောင်းစက်တွေနေဖြင့်ထားကြပါတယ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ထိုကဲ့သို့သောထည်၏ lengths.the နောက်ကျောဘက်...
polyester ပြင်သစ် Terry ထည်
CVC ပြင်သစ် Terry ထည်
TC ပြင်သစ် Terry ထည်
တစ်ခုတည်းဂျာစီထည် - နွေရာသီတီရှပ်ဘို့တရှေးခယျြမှု
သငျသညျနွေရာသီအတွက်ဝယ်အဝတ်များ၏အမြင့်ဆုံးကြိမ်နှုန်းအတို-ကျီတီရှပ်ဖြစ်ရမည်။ ယနေ့ကိုယ်မင်းကိုတီရှပ်ဖြစ်စေကြောင်းသင့်လျော်သောအချို့အထည်ဝေမျှပါလိမ့်မယ်, ကိုယ့်သူတို့ကိုသင်များထဲမှအမျိုးအစားကိုကြိုက်လိမ့်မယ်ယုံကြည်ပါတယ်။ polyester တစ်ခုတည်းဂျာစီထည် ဒါကြောင့်နေ့စဉ်ဘဝများတွင်အသုံးပြုသည့်ဒြပ်ထည်တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖြစ်ပါတယ်။ အကြီးမားဆုံးအားသာချက်ကတော့ရှုံ့ခုခံနှင့်ကိုက်ညီထို့ကြောင့်အဝတ်အစားစေရန်သင့်လျော်သော...
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကာတွန်းမျက်နှာသာမပေးနိုငျတဲ့သူကစားစရာ, ကျပ်? သင်သည်သင်၏မိတ်ဆွေဆုကြေးဇူးကိုပေးပို့မယ့်နေလျှင်အဘယ်ကြောင့်တစ်လက်ဖြစ်ကျပ်ကစားစရာမပို့။ ကိုယ့်ကိုယ်အဆွေခင်ပွန်းသင့်ရဲ့ဆုကြေးဇူးကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ အမှန်တကယ်က, သငျသညျခြေလှမ်းများအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအတိုင်းလိုက်နာလျှင် suffed ကစားစရာအောင်ရန်အလွန်ရှုပ်ထွေးသောမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ဦးကျပ်ကစားစရာလုပ်ဖို့ဘယ်လို? ခြေလှမ်းတဦးတည်း:...
တဦးတည်းဘေးထွက်ဖြီးတဦးတည်းဘေးထွက်ဆန့်ကျင် pilling ဝင်ရိုးစွန်းမွေးထည်
သငျသညျကွက်ထည်ကိုသိက၏အဘယ်အရာကိုလုပ်ရနိုင်သလော ကွက်ထည်စင်ကြယ်သော polyester ၏စေရာကွက် eyelet နှင့်အတူတစ်ထည်ဖြစ်ပါသည်။ အတူယက်နိုင်သည့်အဖြူရောင်-ဆိုး, ကြိုး-ဆိုးနဲ့ကြီးမားတဲ့ jacquard ရှိပါတယ် ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကောင်းသော permeability ၏, အရောင်ချွတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးနောက်, အထည်အလွန်အေးမြသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, ကွက်ထည်နွေရာသီအဝတ်အစားအောင်ရန်အလွန်သင့်လျော်သည်။ ကွက်ထည်၏အားသာချက်: ...
polyester birdeye ထည်
သငျသညျဒီဂျစ်တယ်ပုံနှိပ်သိကြသလော ဒီဂျစ်တယ်ပုံနှိပ်, ကဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကိုသုံးပြီးကြောင်းပုံနှိပ်များထဲမှအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာနည်းပညာ၏စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာနှင့်အတူ, ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံနှိပ်နည်းပညာစက်မှုနှင့်ကွန်ပျူတာအီလက်ထရောနစ်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာပေါင်းစပ်တဲ့ high-tech ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဝင်ရိုးစွန်းမွေးထည် ကြီးစွာသောစက်ဝိုင်းစက်အားဖြင့်ပထမဦးဆုံးအယက်ခဲ့သည့်ထည်တဦးကြင်ကြင်နာနာ, ...
ထိုးပြီး polyester အသေးစားမွေး
ပုံနှိပ်ခြင်း polyester အသေးစားမွေး
ဘတ်စကက်ဘော wear သူတို့အားကစားလုပ်နေကြသည့်အခါလူတို့အဘို့ကိုက်ညီကြောင်းအဝတ်အစားများထဲမှတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ညီညွတ်မှု, ကောင်းတဲ့ရှုံ့: ဘတ်စကက်ဘော wear အားသာချက်များကိုအောက်တွင်ရှိ ဒါကြောင့်အပေါ်ခုခံ, အခြောက်ရန်လွယ်ကူ, ကောင်းသောအဝတ်လျှော်စွမ်းရည်နှင့်။ ဘတ်စကက်ဘော wear အများစုကွက်ထည်၏ထားကြပါတယ်, သင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတွေ့နိုင်ပါသည်အများအပြားအရောင်နှင့်အထူး pattern.as နှင့်အတူဒီဇိုင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်, အလ...
ဘတ်စကက်ဘော wear ထည်
နွေရာသီတီရှပ်အဘို့စင်ကြယ်သောဝါဂွမ်းထည် သင်တို့သိကြသည်, နွေရာသီအရမ်းပူဖြစ်ပါသည်, ဤကဲ့သို့သောပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုကိုသငျသညျလှယျကူသောချွေးပါစေ။ ကိုယ်မင်းကိုကောင်းသောအစိုဓာတ်ကိုစုပ်ယူနှင့်အပူခုခံနဲ့တီရှပ်ကိုကြိုက်လိမ့်မယ်ယုံကြည်ပါတယ်။ စင်ကြယ်သောဝါဂွမ်းထည်နွေရာသီတီရှပ်ဖြစ်စေသင်တို့၏ကောင်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ စင်ကြယ်သောဝါဂွမ်းထည်ကနေဖန်ဆင်းထားသည် ဝါဂွမ်းကုန်ကြမ်း နှင့်များ၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပြီး ကောင်းသေ...
အဆိုပါကတ္တီပါအခွအေနေအရသိရသည်ဒါအပေါ်လွင်ပြင်ကတ္တီပါ, စင်းကတ္တီပါ, ကြိုး-ဆိုးထိုးပြီးကတ္တီပါနှင့်သို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ ကတ္တီပါအမျိုးမျိုးတို့ကိုပုံစံများအမျိုးမျိုးဖွဲ့စည်း, တစ်ချိန်တည်းမှာထည်အပေါ် Cross-စီစဉ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ထည်ဒီလိုမျိုးင်း၏အပေါ်ထူပုံရှိပါတယ် မျက်နှာပြင်။ ထိုသို့ထူဆူဖြိုး, ပျော့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခံစားရနှင့်ကောင်းမွန်သောနွေးထွေးမှု retention ကိုရှိပါတယ်။ ကအဓိကအားဖြင့်ရသောအချိန်သည်ဆ...
tricot bruched ထည်